Shih Tzu (inja-chrysanthemum, inja yengonyama) yenye yeentlobo ezindala kakhulu zeenja ehlabathini. Igama lesiTshayina igama labo (Shih Tzu, Shizi) liguqulelwe njengengonyama. NgesiRashiya, maxa wambi bangabizwa ngokuthi shitsu okanye shih-tsu. Ilizwe leelwimi lezinja yiChina. Kuze kube sekuqaleni kweenja zeenkulungwane zamashumi amabini kule nzala kwakuyizinja ezingavunyelwe inkundla yenkosi.
Imbali yeShih Tzu yohlobo
Ngokwesiko i-shih-tzu ithathwa ngokuba yintlobo yaseTshayina yezinja. Ngokomnye uguqulelo, ilizwe labo liyiTibet. Kuyaziwa ukuba ngo-1653 omnye u-Dalai Lama waseTibet wanikezelwa njengomnikelo kumbusi ezininzi ezinjengeenja ezinjalo, okwenze ukuba lo mzalwane awunqatshelwe, oko kukuthi, yintsapho kuphela yowesizwe. Ngokutsho kwamanye amaxwebhu, sinokucinga ukuba lo buhlanga beza eTibet ukusuka eByzantium ekupheleni kwekhulu le-VI, oko kukuthi, eYurophu. Nangona kunjalo, apho bavela khona ngokwenene abaziwayo ngokuqinisekileyo.
EYurophu, i-shih-tzu yavulwa kwakhona nge-ambassador yaseNorway ngasekupheleni kweminyaka yeshumi elinamashumi amabini ekhulwini le-20, eyayiza e-China kunye ne-Shih Tzu elalibizwa ngeLeidz. Esebenzisa ukudibanisa kwakhe, i-ambassador yakwazi ukufumana izinja ezimbalwa zokuvelisa inzala kwaye emva kokubuyela eYurophu waqala ukuzalanisa le nto engaziwayo kumaYurophu ngaphambi kohlobo.
Imvelaphi yeShih Tzu
Ngokuchanekileyo imvelaphi yale mbolo ayilwanga. Ngokweengcamango ezininzi kunye neziphumo zezifundo zofuzo, kukholelwa ukuba i-shih-tzu yafunyanwa ngenxa yokuwela i-Pekingese kunye neLhasa Apso. Kukho ezinye iingcamango, kodwa akukho mntu uqinisekisiweyo. I-Shih Tzu ingabizwa ngokuba yinto yamadala endala emhlabeni jikelele. Babizwa ngokuba yizinja zeengonyama ngenxa yegama labo lesiTshayina, oku kuthetha ingonyama, kunye neenja-chrysanthemums - kuba indawo yeenwele ebusweni babo ibonakala njengeentyantyambo ze-chrysanthemum.
Umntu weShih Tzu
Ezi zinja ezincinane, nangona zibukeka zihle kwaye zidlala, oko kukuthi, njengento yokuhlobisa, akuyiyo imveliso yokuhlobisa. IShih Tzu, ngaphezu kwayo yonke into, inja yenkwenkwe, kwaye inomfanekiso ohlukile. Umzekelo, ukuba kukho abantu abaningana endlwini, abanalo inkosi ethile, i-shih-tzu iyahlula phakathi kwayo yonke into. Shih Tzu kakhulu akuthandi ukuba yedwa kwaye uya kubaphathi bazo kwizithende zabo, naphi na apho baya khona. Nangona inja ilele - yinto efanayo, ukuba umntu uya kwindawo ethile, ke i-shih-tzu ayinamavila kakhulu ukuvuka kwaye imlandele. Kwaye i-shih-tzu ixhomekeke kakhulu kubantu kangangokuthi bahlala bexhala ngakumbi abantu kunabanye izinja. Ukufakela okunjalo kubantu kubangela ukuba lo mzekelo ube ngumhlobo obalaseleyo kubantu abasweleyo kunye nabantu abadala.
UShih Tzu akakwazi ukubizwa ngokuthi ubuthathaka, banomzimba onamandla okwaneleyo kwaye banokukudonsa ngokukhululekileyo ngokuthelekiswa nabo ubunzima. Nangona kunjalo, ukubasebenzisa njengezinja zokukhusela akucebisi, kuba bancinci kwaye banomdla.
Musa ukuvumela iintsana kunye nezinja eziselula zidlala nabantwana abancinane - izinja zivakalelwa ngathi zifana nazo kwaye zifuna ukudlala kunye nawo onke amandla atholakalayo kubo, angonakalisa umntwana. I-Shih Tzu ingagcinwa ekhaya, ngaphandle kokuthabatha esitrato, nto ibaluleke ngokubalulekayo yokuba xa bekhulile, iinwele zabo ezinde zikwazi ukuphazamisa ukuhamba kunye nabanikazi, kunye neenja ngokwabo. U-Shih Tzu ujwayele ukufumana i-tray. Nangona ngokuqhelekileyo kuthiwa luhlobo olungapheliyo, i-shih-tzu inokukhawuleza, kwaye isoloko isuka kumntwana. Ukuba bahlala bodwa, ke banokuhamba kunye nokunyamekela umnini ngokukhala nokukhalaza imizuzu emininzi, kodwa akunakwenzeka ukuba baqhube. Ngokuqhelekileyo, i-shih-tzu iyasebenza kakhulu kwaye iyakwazi ukudlala kwaye isebenze ixesha elide.
Le inja encinane eneenwele ezinde. Njenge-lapdog yaseMalta ne-Afghan borzoi, zineenwele ezinde kunokuba zifaniswe nomzimba wazo.
I-Shih Tzu ingaba nemibala eyahlukileyo, ngokuqhelekileyo ibe ngumxube obomvu, obomvu, omhlophe nomnyama. Ngamanye amaxesha, iimpawu ziphantse zazimnyama, kwaye ngamanye amaxesha unokubona umhlophe we-shih-tzu kunye ne-mix mixte ye-vanilla, abanye abantu baze badibanise ne-Maltese lapdogs. UShih Tzu, ogqutywe ngokumhlophe, akakho.
Malunga nohlobo olubomvu lwaseBrussels griffon
Pet is your healer
Impilo yezilwanyana ezifuywayo
I-cottage cheese casserole kunye namajikijolo
U-Anastasia Volochkova uyaxhalabisa ngokudansa kwi-stable, ividiyo
Iintlobo zabantu xa kuthelekiswa nezilwanyana
U-Irina Bezrukova uyaqhubeka nokukholisa abalandeli abanemifanekiso enhle
Iingongoma eziphambili omele wazi ngazo ngezicathulo
Udliwano-ndlebe nomntu owaziwayo waseTatiana Franchuk
Impawu ezilungileyo kakhulu kumadoda
Iinqayi ze-lemon ngeerranberries
Indlela yokuhlobisa indlu ngokufanelekileyo ngoMnyaka omtsha
Iimifanekiso ezilishumi eziphezulu